अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत
query_builderMay 28, 2017 2:02 PM supervisor_account रत्न प्रजापति visibility672
संविधान निर्माणपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनेछ र मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूले गरेको विरोधले फेरि मुलुकभित्र अस्थिरता र अन्योलको स्थिति बढ्यो ।
विनाशकारी भूकम्प र तराईमधेसमा सुरु भएको आन्दोलन र छिमेकी मुलुक भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीसमेतले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । झन्डै पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र थला नै प¥यो । इन्धन र कच्चापदार्थको अभावका साथै मजदुरहरूको समेत असहयोगले गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र ठप्पकै स्थितिमा पुग्यो ।
फलतः उद्योगहरूको क्षमता उपयोग २०.० प्रतिशतको हाराहारीमा झ¥यो । उत्पादनमा अप्रत्याशित ¥हास आई समग्र आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशत (संशोधित आँकडाअनुसार) मा सीमित हुन पुग्यो भने अर्थतन्त्रको आकार रु. २२ खर्ब ४७ अर्बमा खुम्चिन पुग्यो । यसो हुनुमा ऊर्जासंकट अर्को मुख्य कारण बन्यो ।
राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको अन्योलको बादल हट्दै गएर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन थाल्यो । नाकाबन्दी क्रमशः खुकुलो बन्दै जानु र आन्दोलनरत मधेसी राजनीतिक दलहरू पनि बिस्तारै नरम हुँदै जानु तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले बिस्तारै गति लिनुले स्थितिमा केही सुधार आउन थाल्यो ।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकार गठन भएसँगै आएको ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्रमा बिस्तारै गति देखापर्न थाल्यो । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक बन्न थाले । यसले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुनेमा आशावादी बनायो ।
मूलतः मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, मूल्य वृद्धिदर, राजस्व, आयात–निर्यात अनुपात, पुँजीबजार, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विदेशी लगानी, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग आदिलाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
यी परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक दिशामा उन्मुख रहन्छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचकको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुरक्षित रहेको मानिन्छ ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक आँकडाहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको सङ्केत गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहनेछ । समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक वृद्धि हुनेछ ।
अनुकूल मौसमका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन १०.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरूको कुल उत्पादन क्षमता उपयोग औसतमा ५४.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग ३९.५ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । क्षमता उपयोग बढ्दा उत्पादन स्वतः बढ्छ । उता विश्व बैंकले बजारमूल्यका आधारमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने बताएको छ । यो २३ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हो । लोडसेडिङको अन्त्य भई विद्युत् उपलब्धता सर्वसुलभ बन्दै गएको, पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको र अनुकूल मौसमका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने आकलन विश्व बैंकले गरेको छ ।
यो वृद्धिदर भारत र चीनकै आर्थिक वृद्धिदरको हाराहारी हो । अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने मूल्य वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा ३.८ प्रतिशत कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा मूल्य वृद्धिदर ९.७ प्रतिशत थियो । गत वर्षको आधार मूल्यको प्रभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य वृद्धिदरमा कमी आएको हो । यद्यपि नौ महिनाको औसत मूल्य वृद्धिदर भने ५.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अघिल्लो वर्षको रु. १० खर्ब ३९ अर्ब २१ करोडको तुलनामा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १० खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने कुल राजस्व सङ्कलन पनि चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राजस्व ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका शीर्षकहरूमा राजस्व उच्च दरमा बढेकाले सरकारको कुल राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५५ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २३.४ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । कुल वस्तु आयात भने ३९.७ प्रतिशतले बढेर रु. ७ खर्ब २६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ९.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
पुँजी बजार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १,६९७.१ विन्दुमा पुगेको छ । उक्त सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १,३८८.६ विन्दु कायम भएको थियो । धितोपत्र बजारमा गरिएका विभिन्न सुधारहरू एवम् वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि सेयर बजार परिसूचक वृद्धिका प्रमुख कारण हुन् ।
यही अवधिमा विदेशी लगानीमा पनि वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशी लगानी रु. ११ अर्ब नाघेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी लगानी रु. ५ अर्ब ९२ करोडमात्रै थियो । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९६.२ प्रतिशत थियो । यो वर्ष यस्तो अनुपात ८९.७ प्रतिशतमा कायम रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसै गरी गत वर्ष कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात ४०.० प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ४३.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ८ सय ५३ अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय विभागको तथ्याङ्क छ । यसअघि यस्तो आय ७ सय ५२ अमेरिकी डलरबराबर मात्रै थियो ।
अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, पुनर्निर्माणका कार्यले लिएको गति र ऊर्जा सङ्कटबाट पाइएको मुक्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ बढेको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण क्रमशः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदै जानु, कृषिमा व्यवसायीकरण हुँदै जानु, देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै जानु, बन्दहड्ताल जस्ता कार्यमा कमी आउनु तथा सरकारले लिएका उत्पादनमूलक नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुजस्ता कारणहरूले चालु आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको हो ।
यसरी २३ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मूल्य वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, राजस्वमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि, विदेशी लगानीमा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि आदि कारणहरूलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भएकोमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
स्थानीय तहको चुनावपछि विकास निर्माणले गति लिने हुँदा अर्थतन्त्रमा थप सकारात्मक सुधार हुने आशा पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि समग्रमा २३ वर्षकै यताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आकलन गरिंदै गरेको अवस्थामा यो वृद्धिदरलाई टिकाइराख्ने संयन्त्रको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनु भने नितान्त आवश्यक छ । विशेष गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन वस्तु उत्पादन र स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्ने आवश्यकता छ ।